Iindaba -Ifryer yomoya, yonwabela ukutya okunempilo
IFRIRE YOMOYA, YONWABELA UBOMI BOKUTYA OBUPHILILEYO
Ukonwabela ukutya lulonwabo olukhulu ebomini. Kwiigourmets ezininzi, ukutya okosiweyo ngokuqinisekileyo yeyona nto uyithandayo, kodwa incasa enuka kamnandi, amava athambileyo kunye nencindi, ukutya okuthosiweyo ikwangoyena mntu uphambili ochaphazela impilo. Ukutya ukutya okunamafutha aphezulu ngumthwalo onzima emzimbeni. Ke, ngaba zikhona izixhobo zokupheka kwintengiso ezinokuthi zigcine incasa kunye nokwenziwa kokutya okuthosiweyo ngelixa kuncitshiswa ukutyeba kwamafutha?
I-SHAO HONG air fryer yinto enjalo evumela zombini impilo kunye nokutya. Inempawu zokupheka ngaphandle kweoyile, ukutya okunempilo kunye namafutha asezantsi, kunye nokucoca okuzenzekelayo. Ngalesi sefriji somoya, ungangoko nangoko ube yingcali yegourmet. Le mveliso yenziwe ngezinto ezikhuselekileyo zokutya ngokugqibeleleyo. Uyilo olwahlukileyo lwe-360-degree-non-dead-angle-cyclone yoyilo olushushu lunokufezekisa ukufudumeza okufanayo kokutya ngaphandle kokukuguqula. Kwangelo xesha, uyilo lwesantya somoya esineejubane ezintathu sinokukhetha isantya somoya esifanelekileyo ngokweendlela zokutya ezahlukeneyo. Kancinci ixesha lokupheka. Ukongeza, i-SHAO HONG air fryer inokuhlala igcina ukutya kumgangatho ophantsi kunye neoyile esezantsi, itshixa isondlo ngaphakathi nangaphandle, kwaye izisa impilo kabini kwizidlo.
I-SHAO HONG air fryer yenze uyilo oluninzi olunomdla. Ngokongeza intsimbi yokuphakamisa intsimbi engenasici, umthamo wefryer yomoya unokunyuswa ukusuka kwi-12L ukuya kwi-17L, eyonyusa kakhulu indawo yokupheka; umzimba weglasi ongafihliyo uyibona ngokucacileyo inkqubo yokupheka. Yonke into iphantsi kolawulo; ngokongezwa kwesingxobo sokugcina, ukugcinwa kwezinto ezinothuli kulunge ngakumbi; Kwangelo xesha, le mveliso ikwaxhotyiswe ngobushushu obuphezulu bokucoca umsebenzi, onokukhawuleza ucime igrisi kwaye uzikhulule ngokupheleleyo izandla zakho.
Ngokusekwe kwimiba yokupheka esempilweni kunye noyilo olunengqiqo, iSHAO HONG air fryer ibisoloko ithandwa ngabasebenzisi, kwaye ikwafumene nempendulo elungileyo yentengiso, ukufezekisa injongo yokwenza ukupheka kube sempilweni kwaye kubelula ubomi. Ukujonga kwikamva, uSHAO HONG uya kuhambelana nomgaqo wokutya okunempilo ngaphandle kweoyile kunye neoyile encinci, kwaye abonelele abasebenzisi ngamava angcono okupheka kunye nezibonelelo zemveliso ezigqwesileyo, uyilo lwemveliso olusondeleyo, kunye neendlela zokupheka ezityebileyo, kunye nokuvumela abasebenzisi ukonwabela ubomi obuphezulu obuphezulu obusempilweni.